Jawaari oo bannaanka soo dhigay Sababta uu Farmaajo u diidan yahay Doorashada. - XAL DOON
Home NEWS Jawaari oo bannaanka soo dhigay Sababta uu Farmaajo u diidan yahay Doorashada.
Jawaari oo bannaanka soo dhigay Sababta uu Farmaajo u diidan yahay Doorashada.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa bannanka soo dhigay sababta Farmaajo uu diidan yahay in Dalka Doorasho ka dhacdo.
Jawaari ayaa sheegay in Farmaajo uu xusuusta ku hayo Doorashooyinkii 2012 iyo 2017kii oo laga guuleystay Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa uu amaanay labadii Madaxweyne ee ka horeeyay Farmaajo oo gartay in ay qabtaan Doorasho xilka wareejiyay balse Farmajo laga waayay geesinimadaas.
Jawaari waxa uu Farmaajo ku eedeeyay in aanay kala garaneyn Danta gaarka ah iyo maslaxada dalka, sidaas awgeed uu tiisa gaarka ah ka door biday tan guud.
Doorashooyinka Soomaaliya ayuu sheegay in waaya kala duwan ay soo martay balse muddo xileedka Farmaajo xaalad ka adag aanay dalka soo marin tan iyo 1960kii.
“Doorashooyinka Dalka tan & 60kii waxa ay soo martay xaalado kala duwan, sida ay u muuqato, Madaxtooyada iyo Madaxda Dowlad-Goboleedyada waxa ay rabaan in ay soosaartaan dadka ay rabaan, markaan oo kale waxaa loo baahan yahay Tanaasul waddanka lagu badbaadinayo” ayuu yiri Jawaari.
Jawaari uu Farmaajo ku eedeeyay in uu meel iska dhigay Dastuurka Dalka maadaama fal dambiyeed aan ka dhicin madaxdii dalka soo maray geystay sida weerarka uu ku qaaday Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Ra’iisul Wasaarihiisa & Baarlamaanka.
Xaaladda Dalka habka lagu badbaadin karo waxa uu ku sheegay in ay ku xiran tahay Xukuumadda Federaalka oo dedaal xooggan gelisay sidii ay u qaban lahayd Doorashooyinka balse Farmaajo uu lugaha ku dhegan yahay.
“Labo jeer ayaa si sharci ah la ii doortay in aan hoggaamiyo Baarlamaanka Soomaaliya, tii u dambeysay aniga oo sharciyan la I doortay taageerana heysta, Dad la’aan-na aan I heysan waxaa weerar bilaa dastuuri ah igu soo qaaday laanta fulinta, Markii aan fiiriyay dadka guud ayaan uga tanaasulay si aanay u burburin Baarlamaanka ama shaqsiyaad gaar ah gacanta u gelin” Sidaasi waxaa yiri Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Muddo sanad ah ayuu si sharci darro ah Madaxtooyada u joogaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halka Dowlad-Goboleeedyadu ay isku badeleen daneystayaal raadinaya in ay boobaan kuraasta si ay u siistaan dad ay la rabaan.
Fariin ayuu u diray Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday isaga oo tusaale usoo qaatay labadii Dowlad ee ka horeeyay, waxa uu Jawaari sheegay in Shariif Sheekh Axmed & Ra’iisul Wasaarihiisa ay isasoo sharaxeen xilka ay waayeen sidaas oo kale Xasan Sheekh iyo Wasiirkiisa koowaad ay ku guuldareysteen Xilka Madaxweynaha.
Jawaari ayaa Farmaajo ugu baaqay in uusan isku dhajin xilka balse uu ogolaado doorasho tartan furan loo galo si loo wado Doorashooyinkii dalka xilalka lagu kala wareegayay si qofkii calaf u yeesha uu waddanka u hoggaamiyo.
“2012kii waxaa Wadajir u tartamay Sheekh Shariif & Ra’iisul Wasaarihiisa Cabdiweli Gaas oo labaduba ku guuldareystay waxaana ka guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud oo aan sheekadaba ku jirin, 2016kii waxaa tartamayay Madaxweyne Xasan & RW Cumar Cabdirashiid waxaa xilka ku guuleystay Farmaajo” Waa sida uu yiri Jawaari.
“Milkiyadda & maamulka alle ayaa wata, Shacabka haloo turo, arrintu sida ay u socoto ma aha si wanaagsan, Farmaajo waxa uu kamid ahaa musharixiin soo jeedisay 2016/17 in laga badelo goobta Doorashada & sida wax loo waday waana ka aqbalay” ayuu yiri Jawaari.
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka BFS Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in wixii ka dhasha doorashooyinka “lugaha lagu dhegan yahay” mas’uuliyadaas ay qaadayaan Madaxda muddo xileedka sharciga ka dhammaaday sida uu hadalka u dhigay.